China Custom Eyelash Packaging Soft Thick Handmade 25mm 3d Mink Eyelash ifektri abakhiqizi | Weiti
1, Ibanga eliphezulu le-100% langempela loboya be-mink
2, Wenziwe ngezandla ukuqinisekisa ikhwalithi engcono kakhulu
3, 25mm imivimbo eminyene emide
4, Iyasebenza futhi ihlala isikhathi eside ukusetshenziswa kuze kube izikhathi ezingama-25-30
Kude & Kujiyile & Fluffy
√ Thuthukisa amehlo akho ngemivimbo yamehlo enamanga
Engasindi futhi evuselelekayo, imivimbo eyenziwe ngezandla, engenanya ilungele noma imuphi umcimbi nokuma kwamehlo; bazokwengeza ivolumu, ukujula nencazelo yemiphumela ehlala isikhathi eside, yemiphumela yokubonisa.
Yenziwe ngesandla, iphelele
Ama-eyelashes ethu angama-25mm mink amanga wonke enziwe ngezandla ngobungcweti, sinaka ikhwalithi engcono kakhulu, ukuze ukugobeka nokugoqeka kwezinkophe kungokwemvelo. Ama-eyelashes ethu amanga ahlanganisa ngokuphelele ama-eyelashes akho emvelo, akhulise ubude nevolumu, futhi adale ukubukeka okuhle. Kuthuthukiswe ukuthuthukisa ubuhle bakho nobuntu bakho.
√ Iyasebenza futhi ihlala isikhathi eside
Yize iningi le-mink eyelashes elingelona iqiniso likuvumela ukuthi uphinde ulisebenzise kuze kube izikhathi eziyi-10, ama-eyelashes ethu angamanga angama-25mm akhiwe ngokucophelela futhi angasetshenziswa isikhathi eside, izikhathi ezingama-30 zokusetshenziswa, ngaphandle kokulahlekelwa yinhle yawo.
√ Ithambile futhi ikhululekile ukugqoka
I-mink eyelash yethu ebukeka ngokwemvelo yenziwe ngebhande likakotini, okulula kakhulu ukulisebenzisa, lithambile futhi liyimvelo ekuthinteni, okunciphisa ukungakhululeki kokugqoka izinkophe zamanga.
Njengoba iMink ​​yaseSiberia eyi-100% iseminyakeni engcono kakhulu kusuka kuma-zoo wamahhala futhi iphinde isetshenziswe kabusha ngezikhathi zonyaka zokuchitha, imivimbo yethu inikeza ukukhethwa okubanzi kakhulu kweMink Lashes eyiqiniso. Ngokusebenzisa ibanga eliphakeme loboya be-mink, imivimbo yethu ye-mink igxiliwe futhi yinhle, kepha ithambile futhi icashile. Sinikela ngemivimbo engu-voluminous, endethen, crisscross kanye ne-mink fur imivimbo efanelekile futhi ebalulekile kuyo yonke imicimbi, efana nokwenza izimonyo nsuku zonke, iphathi, njll.
Iqinile futhi akulula ukufiphala
Ukupakisha okuhle nelebuli yangokwezifiso
Izitayela ezahlukahlukene ezilungiselelwe
Ukuphrinta kwe-logo ye-eyelash:
1, Ngokupakisha kwe-eyelash okwenziwe ngomumo, sihlala sisebenzisa indlela yokuphrinta ye-UV
Ukuphrinta kwe-UV kuyinqubo yokuphrinta esebenzisa ukukhanya kwe-ultraviolet ukomisa nokwelapha ama-inks. Kuyadingeka ukufanisa uyinki oqukethe i-photosensitizer enesibani esilapha i-UV.
2, Ngokupakisha okwenziwe ngezifiso kwe-eyelash, sisekela indlela ehlukile yokuphrinta
Kwenziwe ngentando logo yangasese ekupakisheni, imvamisa sisekela ukuphrinta kwesilika kasilika, ukuphrinta kwe-UV, ukunyathela kokushisa nokunye. Udinga nje ukusitshela ukuthi ufuna muphi umphumela, lapho-ke singenza ngokufana nemfuneko yakho.
Ukuphrinta Kokushisa Okushisa
Ungayifaka kanjani imivimbo yamanga?
Khipha ama-eyelashes amanga ofuna ukuwagqoka ebhokisini bese ugcina ibhokisi ukuze ligcinwe kalula ngemuva kokusetshenziswa.
Sebenzisa udlawana wenkophe ukususa izinkophe zamanga kuthileyi.
Linganisa imivimbo ngemisuka yomugqa wokuqhuma wemvelo.
Langaphambilini Kwenziwe ngentando Amalebula Amalebula Aseceleni I-Wholesale Fluffy 25mm Mink Eyelashes
Olandelayo: Isitolo esidayisa yonke impahla Label Private 100% Handmade Cruelty Free 3D Mink Eyelashes Vendor
Ama-eyelashes ama-Mink angama-25mm
China Factory Bulk 3d Eye Lashes Isitolo esidayisa yonke impahla 25mm ...
Isitolo esidayisa yonke impahla Ivolumu Strip Eyelashes 100% Mink Thic ...
Ukuqhuma Kwamehlo, ezambiwa, Izandiso ze-Eyelash, Abadayisi bezinkophe, i-eye liner, imivimbo ye-mink,